Jeux corporatifs – 10 taon’ny CEPA : hankalazaina ny 27 sy 28 mey ho avy izao | NewsMada
Jeux corporatifs – 10 taon’ny CEPA : hankalazaina ny 27 sy 28 mey ho avy izao
Feno 10 taona amin’ity taona 2017 ity ny Centre des écoles pépinières d’Alliance (CEPA); Fikambanana mitaiza ireo ankizy sahirana ara-pivelomana eny amin’ny faritra iva, ary manampy azy ireo hiditra an-tsekoly, tarihin’ny filohany, Sivah Gaston. Tsy avelan’izy ireo handalo fotsiny izany tsingerintaona izany fa hankalazaina ka anisan’izany ny fanomanana “jeux corporatifs”, hatao etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina sy eny Alarobia, ny 27 sy 28 may ho avy izao.
“Bras de fer” ny teny entina amin’ity lalao ity. Tsy fiadiana izay ho be sandry fa hilazana fa misy fihaonana ara-panatanjahantena eo amin’ireo andrimpanjakana sy ireo minisitera 32, ary ireo orinasa samy hafa. Taranja enina no hifaninanana : ny baolina kitra lalaovina olona fito, hatao eny amin’ny kianjan’Alarobia.
Hatao eo Mahamasina kosa ny volley, ny basikety iarahan’ny lahy sy vavy, ny tenisy ambony latabatra ary ny tsipy kanetibe, ho an’olon-telo miaraka. Ny alahady maraina kosa ny hazakazaka manodidina ny farihin’Anosy.
Nasain’ny mpikarakara manokana ny polisy, ny Capsat, ny RM1 sy ny RTS ary ny Zandary. Mba hahafahan’ny rehetra mandray anjara, noferana ho 300.000 Ar ny saran’ny fandraisana anjara. Afaka miantso an’Atoa Rolland, amin’ny laharam-tariby 034 74 591 17, ireo izay liana amin’ity lalao ity. Loka maro sy fahatsiarovana avy amin’ny CEPA no hatolotra ireo mpandresy. Hahazo fankasitrahana manokana ireo mpijery mahay manohana sy miavaka indrindra.
Hatao eny amin’ny ANS Ampefiloha, ny asabotsy 13 mey ho avy izao, manomboka amin’ny 9 ora maraina, ny fivoriana ara-teknika. Mbola azo hatao eny an-toerana ihany koa ny fisoratana anarana ho an’izay tsy nahatontosa izany.
Eo ambany fiahian’ny minisitry ny Fanatanjahantena, Andriamosarisoa Jean Anicet sy ny minisitry ny Fampianarana ambaratonga faharoa, Rabary Paul, ary ny ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra, Ravalomanana Lalao, ity “jeux corporatifs CEPA” ity.